Olana amin'ny Siri Remote vaovao an'ny Apple TV 4K | Avy amin'ny mac aho
Vao naseho teo amin'ny fiarahamonina io. Ilay Apple TV 4K vaovao heverina fa tonga hanova ny tsenan'ny fahitalavitra na fahitalavitra marani-tsaina izany. Na izany aza, tsy dia nanomboka tsara ho an'ny fitaovana manokana. Ny fahaizan'i Apple Music tsy misy fatiantoka vaovao dia mbola tsy mifanaraka amin'ity fitaovana vaovao ity, na dia toa misy fanavaozana ho avy aza izany. Raha izany dia ampianay ny olana penultimate nahatsikaritra izany misy fiantraikany mivantana amin'ny Siri Remote, tsy hainay raha vokatra mahomby io.
Io kodiarana misy ny lavitra io, ny Siri Remote, toa izany dia manome olana ny mpampiasa sasany. Ny fanavaozana ny Apple TV dia nanolotra famolavolana Siri Remote vaovao izay mampiasa trackpad boribory, ary koa fihetsika vaovao izay mamadika ny trackpad ho kodiarana lehibe iray. Amin'ny alàlan'ny fampiasana fihetsiketsehana boribory manodidina ny sisin'ny trackpad, afaka misosa mandroso sy miverina amin'ny alàlan'ny atiny ny mpampiasa.
Misy olon-kafa manana fitondran-tena hafahafa amin'ny vaovao # AppleTV4K ary Siri Remote? Rehefa manandrana mikorisa amin'ny clickwheel vaovao aho dia mandroso hatrany hatrany. Mitranga amin'ny fampiharana marobe toa #DisneyMore ary #Netflix fampiharana. Nahita an'io koa ve ianao nandritra ny fanadihadihana nataonao @Andrew_OSU ? pic.twitter.com/VfIOzQNuOP
- David Kurz (@kurze_info) Enga anie 23, 2021
Amin'ny fitsapana notontosain'ny AppleInsider dia nisedra olana mitovy amin'ny ny mpampiasa sasany efa voalaza etsy ambony. Ny olana dia tsy voafetra amin'ny fampiharana manokana, satria misy fiatraikany amin'ny fampiharana horonan-tsary rehetra amin'ny fomba mitovy. Te handroso ianao, fa miverina amin'ny toerana nanombohany ilay horonan-tsary. Raha bibikely manerana ny rafitra io dia mety manana karazana fanamboarana ho an'ny olana i Apple ao anatin'ny a fanavaozana ny TVOS ho avy.
Ny tena izy dia tsy dia fantatra loatra hoe inona izany lesoka izany, izay tsy mamela ny fifehezana hiasa tsara. Ny mpampiasa tsindraindray dia hiato mandra-pahatongan'ny boribory kely iray ary avy eo manomboka indray. Saingy tsy fandidiana mahazatra io, noho izany hiandry izahay hahita izay lazain'i Apple, raha manamarina ny fisian'io olana io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Olana amin'ny Siri Remote vaovao amin'ny Apple TV 4K
Apple TV koa tsy hanohana ny seho audio tsy misy fatiantoka an'ny Apple Music.